+7 nhetembo dzakanyorwa nevakadzi | Zvazvino Zvinyorwa
Nekuti pazviitiko zvakawanda vakanyaradzwa; nekuti nekuda kwezvikonzero zvinoramba zviripo nanhasi uye isu tisinganzwisise, ivo vachiri kufuratirwa kana vachienzaniswa nemurume murume; nekuti vane hunhu hwakaenzana nehwevakanyorwa nevanhu; nekuti iri zvakare zvinyorwa uye pano, mune ino yekunyora blog, isu takazvipira kutaura pamusoro pezvakanaka zvinyorwa ... Nezvikonzero izvi zvese uye zvimwe zvandingaramba ndichikupa, nhasi ndinokuunzira chinyorwa Nhetembo 5 dzakanyorwa nevakadzi.
Tongere wega ... Kana zvirinani zvakadaro, usatonge, ingonakidzwa ...
1 Mudetembi wechikadzi wekutanga pasi rose
1.1 Kukwidziridzwa kweEnheduanna kuna Inanna
1.1.1 INNANA UYE ZVINODZIDZISWA NAMWARI
1.1.2 INNANA UYE AN
1.1.3 INNANA UYE ENLIL
1.1.4 INNANA UYE ISHKUR
1.1.5 INNANA UYE ANUNNA
1.1.6 INANNA NAEBIH
2 Dzimwe nhetembo dzemadzimai munofanira kuziva
2.1 «Ndinomuka» (Maya Angelou)
2.2 "Mhete" (Emily Dickinson)
2.3 "Mamirionea" (Juana de Ibarbourou)
2.4 "Iyo caprice" (Amparo Amorós)
2.5 "Iyo Manor Bindu" (Sylvia Plath)
2.7 "Gunun'una nezverombo rakanaka" (Sor Juana)
2.8 "Rudo rwakanyarara" (Gabriela Mistral)
2.9 "Akarasika caress" (Alfonsina Storni)
2.10 "Vanoti zvirimwa hazvitaure" (Rosalía de Castro)
Mudetembi wechikadzi wekutanga pasi rose
Kunyangwe vakadzi vakadzoserwa kunzvimbo yechipiri mune zvese hunyanzvi, chokwadi ndechekuti ndivo vaive vakamira mune dzimwe nguva. Uye chimwe chinhu chisingazivikanwe ndechekuti, nyanduri wekutanga, aive mukadzi, uye asiri murume. Tinotaura nezvazvo Enheduanna, mwanasikana waMambo Sargon I weAcad.
Enheduanna aive mupristakadzi waNannar, mwari wemwedzi weSumerian. Munguva yake, masimba ezvematongerwo enyika nechitendero aive mumwechete, ndosaka aigara achitora chikamu muhurumende yeUri.Aive zvakare, sekukuudza kwatakaita, mudetembi wekutanga pasi rose.
Enheduanna nhetembo inozivikanwa nekuve ye chinamato. Akainyora pamahwendefa evhu uye nemunyoro wecuneiform. Anenge ese nhetembo ainyorerwa kuna mwari Nannar, tembere, kana kunyange mwarikadzi Inanna, uyo aidzivirira imba yeAkkad (kwaaive).
Muchokwadi, imwe yenhetembo dzakachengetedzwa ndeinotevera:
Kukwidziridzwa kweEnheduanna kuna Inanna
INNANA UYE ZVINODZIDZISWA NAMWARI
Mukadzi wezvinhu zvese, mwenje uzere, mukadzi akanaka
anokudai denga nenyika,
shamwari yetembere yaAn
iwe unopfeka zvishongo zvikuru,
unoshuvira tiara yemupristikadzi mukuru
vane maoko akabata zvinhu zvinomwe,
wakavasanangura, ukaturika paruoko rwako.
Iwe waunganidza izvo zvinoyera uye uzviise
sunga pamazamu ako
INNANA UYE AN
Seshato wafukidza pasi nehuturu
semabhanan'ana paunoomba pamusoro penyika
miti nezvirimwa zvinowira munzira yako.
Uri mafashama ari kuburuka kubva
Lunar Mwarikadzi weDenga nePasi!
moto wako unotenderera uchitenderera
Mukadzi akatasva chikara,
Izvo zvichiri kukupa hunhu, matsvene mirairo
uye iwe sarudza
iwe uri mune yedu yese tsika huru
INNANA UYE ENLIL
Madutu anokweretesa iwe mapapiro
muparadzi wenyika dzedu.
Anodiwa naEnlil, iwe unobhururuka pamusoro penyika yedu
iwe shumira zvirevo zvaAn.
Ah mukadzi wangu, ndichinzwa kurira kwako
zvikomo nemapani zvinokudza.
Patinomira pamberi pako
kutya, kudedera muchiedza chako chakajeka
tinoimba, tinovachema uye
tinochema pamberi penyu
uye tinofamba tichiuya kwauri nenzira
kubva kuimba yekugomera kukuru
INNANA UYE ISHKUR
Iwe unobvisa zvese muhondo.
Ah mukadzi wangu pamapapiro ako
iwe unotakura iyo yakakohwewa uye iwe unorwisa
Unodzvova sedutu rine simba
iwe unotinhira uye unoenderera mberi uchitinhira uye uchizvitutumadza
Tsoka dzako dzizere nekusagadzikana.
Nembira dzenyu dzekugomera
Ndanzwa rwiyo rwako rwekuchema
INNANA UYE ANUNNA
Oo mukadzi wangu, Anunna, iwo makuru
Achirova semaoko pamberi pako,
dzinoyerera dzakananga kumawere.
Havana hushingi hwekufamba
pamberi pekutarisa kwako kunotyisa.
Ndiani anogona kudzora moyo wako une hasha?
Kwete Mwari mudiki.
Moyo wako une hasha unopfuura
Mukadzi, iwe sirika umambo hwechikara,
Hasha dzenyu dzinopfuura kudedera
Iwe mwanasikana wedangwe waSuen!
Madam, mukurusa pasi pano?
Kwamuri nzizi dzakazara neropa
uye vanhu havana chavanganwa.
Hondo yemakomo iri kuuya yakanangana newe
Varume vechidiki vane hutano vanoratidzira
Guta rekutamba rizere ne
akananga kwauri, nhapwa.
Dzimwe nhetembo dzemadzimai munofanira kuziva
Vakadzi vagara vari chikamu chenyika, uye nekudaro, ivo zvakare vakave vagadziri. Vakagadzira zvinhu, vakaita hunyanzvi hwakawanda (zvinyorwa, mumhanzi, pendi, zvivezwa ...).
Kutarisa pane zvinyorwa, mukadzi asiya mucherechedzo padanho rake. Mune nhetembo, kune mazita mazhinji echikadzi anoonekera, senge: Gloria Fuertes, Rosalía de Castro, Gabriela Mistral ...
Asi chokwadi ndechekuti havasi ivo voga. Naizvozvo, pano tinokusiira vamwe nhetembo dzakanyorwa nevanhukadzi kuti iwe uwane.
«Ndinomuka» (Maya Angelou)
Unogona kunditsanangura munhoroondo
Unogona kundizvuzvurudzira mumarara acho
Zvakadaro, seguruva, ndinomuka.
Kusazvibata kwangu kunokunetsa here?
Nekuti ndinofamba kunge ndine matsime emafuta
Kupomba mumba yangu yekutandarira.
Kungofanana nemwedzi nemazuva,
Kunge tarisiro inobhururuka yakakwira
Pasinei nezvose, ndinosimuka.
Ungada here kundiona ndichiparadzwa?
Uine musoro wako pasi uye maziso ako akaderedzwa?
Uye mapendekete akatsvedza kunge misodzi.
Kuneta nekuchema kwangu kwemweya.
Kuzvikudza kwangu kunokugumbura iwe here?
"Mhete" (Emily Dickinson)
Ndakanga ndine ringi pachigunwe changu.
Kamhepo kaive pakati pemiti kaisanzwisisika.
Zuva iri raive rebhuruu uye raidziya uye rakanaka.
Uye ndakarara pahuswa hwakanaka.
Pandakamuka ndakaratidza kushamiswa
ruoko rwangu rwakachena pakati pemasikati machena.
Mhete iri pakati pemunwe wangu yainge yaenda.
Ndine zvakawanda sei izvozvi munyika ino
Icho chitaurwa chegoridhe chine ruvara.
"Mamirionea" (Juana de Ibarbourou)
Bata ruoko rwangu. Handei kunaya
vasina shangu uye vakapfeka zvakapfeka, vasina amburera,
nevhudzi mumhepo uye muviri uri mukiss
oblique, inozorodza uye diki, yemvura.
Rega vavakidzani vaseke! Sezvo isu tiri vadiki
uye isu tese tinodanana uye tinofarira mvura,
tichafara nemufaro wakapusa
yeimba yeshiri dzinozvambararira pamugwagwa.
Kunze kune minda nemugwagwa weacacia
uye chechishanu chinoshamisa cheuyo murombo ishe
mamioneire uye akafuta, uyo ane goridhe rake rese,
Ini handina kukwanisa kutitengera imwe yechuma
zvisingaite uye zvakakurisa izvo Mwari zvaakatipa:
iva anoshanduka-shanduka, uve mudiki, uzere nerudo.
"Iyo caprice" (Amparo Amorós)
Ini ndoda kuve-set uye kufamba
mundege yakavanzika yega
kutora mutumbi kusuku
kuna Marbella uye anoonekwa husiku
pamapati anoburitswa nemagazini
pakati pevakuru, vatambi-vakomana, vasikana vakanaka uye maartist;
roora nzeve kunyangwe akashata
uye ndipe mifananidzo yangu kumuseum.
Ndatora nguva yekuenda
pabutiro reVogue rekupfeka
anopenya mitsipa nemadhaimani
mumitsipa inoshamisa kwazvo.
Vamwe avo vakaipisisa vakazviwana
zvinoenderana nekusaina murume akanaka:
avo vakapfuma nevakuru vanobvuma
kana ukadaro unogona kuvadzivisa
kukusunga iwe ane rudo Kurd
nokudaro kukwirisa nyaya inosemesa.
Amai, amai, zvakadaro-seti ini ndinoda kuve
uye kubva nhasi ndichaenda kuzvikumbira!
"Iyo Manor Bindu" (Sylvia Plath)
Matsime akasvava, maruva anopera.
Zvinonhuwira zvekufa. Zuva rako riri kuuya.
Mapeya anowana mafuta senge mashoma maBhudha.
Huru yebhuruu, remora kubva mudhamu.
Uye iwe uri kuyambuka nguva yehove,
mazana emakore anodada enguruve:
chigunwe, huma, paw
simuka pamumvuri. Nhoroondo inodyisa
iwo maburi akakundwa,
uye gunguo rinonyaradza nguo dzake.
Shaggy heather iwe nhaka, nyuchi elytra,
kuzviuraya, mapere anopfidza,
maawa matema. Nyeredzi dzakaoma
kuti yero ivo vava kutokwira kudenga.
Mhungu patambo yayo
gungwa rinoyambuka. Makonye
vanosiya dzimba dzavo voga.
Shiri diki dzinosangana, dzosangana
nezvipo zvavo kumiganhu yakaoma.
kwete kupinda munzira,
mamwe mavhesi anojekesa.
Ndakapedza mazuva mazhinji ndisina kunyora,
pasina kudya asi kuchema.
"Gunun'una nezverombo rakanaka" (Sor Juana)
Mukundidzingirira, nyika, chii chauri kufarira?
Ndinokukanganisa sei, ini ndichingozama
isa runako mukunzwisisa kwangu
uye kusanzwisisa kwangu mune tsvarakadenga?
Handikoshese pfuma kana hupfumi,
uye saka zvinogara zvichindifadza
isa upfumi mukunzwisisa kwangu
kupfuura kunzwisisa kwangu mune fuma.
Uye ini handifungidzire runako rwapera
Izvo zvakapambwa zvevanhu zvemazera
uye handifarire hupfumi fementida,
kutora zvakanakisa muchokwadi changu
shandisa zvisina maturo zvehupenyu
Kupfuura kudya upenyu pasina.
"Rudo rwakanyarara" (Gabriela Mistral)
Kana ini ndakakuvenga iwe, ruvengo rwangu rwaizokupa iwe
mumashoko, kudzikamisa uye chokwadi;
asi ini ndinokuda uye rudo rwangu haruvimbike
kune uku kutaura kwevarume, kwakasviba kudaro.
Iwe ungade iyo ikashandurwa kuita mhere,
uye inouya kubva pakadzika zvekuti haina kugadzirisa
rwizi rwayo rwunopfuta, rwapera simba,
pamberi pehuro, pamberi pechipfuva.
Ini ndakafanana nedziva rizere
uye ini ndinoratidzika kwauri setsime remvura.
Zvese zvekunyarara kwangu kwainetsa
zvinova zvinotyisa kupinda kupinda murufu!
"Akarasika caress" (Alfonsina Storni)
Iyo caress pasina chikonzero inoenda kubva kuminwe yangu,
inobuda muminwe yangu ... Mumhepo, painopfuura,
iyo caress inodzungaira isina kwainoenda kana chinhu,
iyo yakarasika caress ichaitora ndiani?
Ndinogona kuda manheru ano netsitsi dzisingaperi,
Ndaigona kuda wekutanga kusvika.
Hapana anouya. Dzinongova nzira dzemaruva.
Iyo yakarasika caress inotenderera… roll…
Kana mumaziso vakutsvoda iwe manheru ano, mufambi,
kana kugomera kunotapira kuchizunza matavi,
kana ruoko rudiki ruchimanikidza minwe yako
izvo zvinokutora iwe nekukusiya iwe, izvo zvinokuwana iwe uye zvinosiya.
Ukasaona ruoko irworwo, kana iwo muromo unotsvoda,
kana iri mhepo iyo inonyengera kunyepedzera kwekutsvoda,
o, mufambi, ane meso akafanana nedenga,
Mumhepo yakanyungudutswa, uchandiziva here?
"Vanoti zvirimwa hazvitaure" (Rosalía de Castro)
Vanoti zvinomera hazvitaure, kana matsime, kana shiri,
Kana iye anofambisa nerunyerekupe rwake, kana nekupenya kwake nyeredzi
Ivo vanozvitaura, asi hachisi chokwadi, nekuti nguva dzose pandinopfuura,
Nezvedu vanogunun'una uye vanoshevedzera vachiti:
-Panoenda mukadzi anopenga achirota
Nechitubu chisingaperi chehupenyu neminda,
Uye munguva pfupi, nekukurumidza, bvudzi rake richava grey,
Uye iye anoona, achidedera, kutonhora, kuti chando chinovhara meadow.
Kune musoro wachena pamusoro wangu, uye kune chando mumafuro;
Asi ini ndinoenderera mberi nekurota, murombo, asingarapike wekurara,
Nechitubu chisingaperi chehupenyu chiri kudzikira
Uye nekusingaperi kutsva kweminda nemweya,
Kunyange hazvo dzimwe dzakawoma uye kunyange dzimwe dzakapiswa.
Nyeredzi uye matsime nemaruva, usanyunyuta nezve kurota kwangu,
Pasina ivo, sei kukuyemura iwe kana maitiro ekugara usina ivo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » +7 nhetembo dzakanyorwa nevakadzi
Ana Maria Serra akadaro
Sarudzo yakanaka yevanyori nenhetembo. Iko kufamba panguva yenguva dzekare madingindira kubva echikadzi kutarira uye chokwadi, ichigara ichishanda, inoratidzirwa zvinoenderana nehunyanzvi hwese nguva. Makorokoto.
Pindura Ana María Serra